နိုဝင်ဘာ မှာပဲ နှစ်ကိုယ်တူဘဝလေးစခဲ့ပီး နိုဝင်ဘာမှာပဲ အဆုံးသတ်ခဲ့ရတဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအတွက် စာလေးတစ်စောင် ရေးခဲ့တဲ့ ငွေတီဦး – Shwe Likes
သရုပ်ဆောင် ပြေတီဦး ရဲ့ညီ မဖြစ်သူ ငွေတီ ဦးကတော့ ကျေး ဇူးရှင်ဖေေ ဖကိုရော ချစ်ရ တဲ့ခင်ပွန်းသည် ကိုရော အချိ န်ခဏေ လးအတွင်းမှာ ဆုံးရှုံးခဲ့ရ တာ ဖြစ်ပါ တယ်။ ငွေ တီဦးက (၁၀) နှစ်ကြာေ ပါင်းသင်းေ နထိုင်ခြဲ့ ကတဲ့ ခင်ပွန်းသည်ကို သတိရတမ်း တနေလျက် ရှိပြီး ခင် ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ အ မှတ်တရတွေကို အမြဲတမ်း ရင်ဖွင့်နေ တာပဲဖြစ်ပါတ ယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ငွေတီ ဦးက ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ရ က်တွေမှာ တရားသဘောဆင်ခြင်ပြီး မိန်းမကိုလည်း အရမ်းချစ်ကြော င်း တဖွဖွပြော သွားတဲ့အေ ကြာင်းကို ပြောလာပါတယ်။
“လွမ်းပီးခံစား ကျန်ရစ်ခဲ့မှာကို မမြင်ရက်ေ တာ့လောက်အော င် သူ့ကိုအရ င်ပေးသွားချင်မိခဲ့တဲ့ ကိုယ်က ပိုချစ်ခဲ့တာလား..?? ကိုယ်ဝေဒနာ ခံစားရမှာမြ ဖစ်စေချင်လို့ သူတစ်ယော က်ပဲ နာကြဉ်နေတဲ့ကြား က ကျေနပ်တယ် ပျော်တယ်ဆိုတဲ့ သူက ပိုချစ်ခဲ့တာ လား..?? တစ်ချို့ သူတွေလဲ ကျွန်မလိုပဲ တွေးမိကြမှာပါ။ အရင်ထွက်သွားခွင့်ရတဲ့သူက ကိုယ်ပဲဖြစ်ချင် တယ်ဆို တာမျိုး..ကျွန်မလေ ကျန်ခဲ့ရမှာ ကို သေမှာထက် သိပ်ကြော က်တာ.. အရင်သေသွားတာ ကိုယ်ပဲဖြစ်ခွင့်ရချင်တာ..ဒါပေမယ့် ဆေးရုံပတ်လမ်းမှာ လမ်းလျှော က်နေရင်း ရုတ်တရက် ခံစားချက်တစ်ခုဝင်လာတယ်..”
“ကျန်ခဲ့ရတဲ့ နာကြဉ်မှုကို သူ့ကို မခံစားေ စချင်တော့ပဲ လွတ်မြော က်ငြိမ်းအေး သွားတာ သူဖြစ်လဲ ကောင်းတာပါပဲလေ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်..ကျန်ခဲ့ရင် အစစအ ရာရာ အဆင်မေြ ပမှာ စိုးတဲ့အထိ စိတ်မချတဲ့ ခံစားချက်..ချန်ထားရစ်ခံရမယ့်နေရာကို ရင်နာနာနဲ့ ကြည်ဖြူစွာ ခံယူလိုက်ချင်တဲ့ ခံစားချက်..ကိုယ်သိပ်ေ ကြာက်တဲ့ ကျန်ခဲ့ရမယ့် ဝေဒနာကို သူမခံစားရပါစေနဲ့ ဆိုတဲ့စိတ်က ရုတ်တရက် ဝင်လာတာ.. အတ္တကိုခွာချမှ မြင်ရမယ့် မေတ္တာနဲ့ နွယ်တဲ့ အချစ်မျိုးကို ရုတ်တရက်ခံစားခဲ့ရတယ်.. နာကြဉ်မှုတွေ ကနေ သူလွတ်မြောက် သွားပါစေ..ဒီ့ထက် ပိုအေးချမ်းမယ့်ဘဝမှာ ပိုပီးကျန်းမာသန်စွမ်းမယ့် ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အသစ်တဖန် ပြန်စနိုင်ပါစေ.. ကိုယ့်ထ က်ပိုချစ်နို င်မယ့်သူနဲ့ ဆုံပါစေ..”
“ပိုချစ်တဲ့သူ ကိုယ်ဖြ စ်မယ်လို့ထင် ခဲ့တာ မှားသွားမှန်း အရာရာနော က်ကျပြီးမှ သိခဲ့ရတယ်။ “ကို က ပိုချစ်တာ” လို့ သူအမြဲပြောတု န်းက ကိုယ်က သိပ်မယုံ ခဲ့မိဘူး။ ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ အကြော င်း သိခဲ့သူတွေ အထူးသြ ဖင့် အမေပေါ့လေ.. “သူက သမီးကို ပိုချစ်တာ”တဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေက “ငွေတီရယ်..သူပိုချစ်တာ ငါတို့တောင် သိတယ်တဲ့” သူတို့ပြောမှ တဖြေးဖြေး လက်ခံလာတယ်။ နိုဝင်ဘာ ကို နှုတ်ဆ က်ရတော့မယ်..ကိုရယ်.. အမှတ်ရစရာတွေ အရမ်းများတဲ့ နိုဝင်ဘာ.. ၁၁.၁၁.၁၁ မှာ လက်မှတ်ထိုးတယ်။ နိုဝင်ဘာမှာ Pre Wedding တွေ ရိုက်တယ်။ ၂၀၁၆ နိုဝင်ဘာမှာ Mediacorp နဲ့ Collaboration လုပ်ပီး ပွဲတွေ လုပ်တယ်။ ဒီနေ့..၂၉ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ မှာ အိမ်စဆောက်ဖို့ ပန္နက်တင်မြေသန့်မင်္ဂလာ လုပ်တယ်။ဒီနိုဝင်ဘာမှာပဲ ကိုက ထားခဲ့တယ်..”
“Anniversary မှီအော င်များ ဒီရောဂါဆိုးကို ၄ လလောက် တောင့်ခံနေခဲ့ တာလား။ ဒေါသစိတ်နည်းပီး သီးခံစိတ်ရှည်တတ်တဲ့ ကို့အကျ င့်ကြောင့် တခါမှ ကြီးကြီးမားမား ရန် မဖြစ်ခဲ့ဘူးသလို .. ချစ်က စိတ်ဆိုးလို့ စကားမာမာေြ ပာမိရင်တောင် စိတ်မဆိုးဘဲ.. ညရောက်တာ နဲ့ လက်ေ မာင်းပေါ် ခေါင်းကို အတင်းဆွဲတင်ပီး ကျောကို ပုတ်သိပ်ခဲ့တာ။ အရာရာဟာ ပြန်စဉ်းစားကြည့်ရ င် ကျေနပ်စရာ လွမ်းစရာေ တွကြီးပဲ။ လူ့ဘဝကို ခနလာ လည်တဲ့ ကို နဲ့ ဆုံခွင့်ရခဲ့တာ အချိန်အတိုင်းအ တာအရ နည်းတယ်ဆိုပေမ ယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် အကော င်းဆုံးဖြည့်စည်းေ ပးဆပ်ခွင့် ရခဲ့တာ အကောင်းဆုံးဆုလာဘ်ပဲ။
တစ်ယောက်ကို တစ်ေ ယာက် ဒဏ်ရာတွေမပေးခဲ့ကြတာ။ တစ်ယောက် လိုအပ်ချက်ကို တစ်ယောက် ဖြည့်စည်းပီး အပစ်အနာအ ဆာတွေကို ခွင့်လွှတ် ခဲ့ကြတာ။ ရခဲ့ဘူးတဲ့ ချိုမြိန်တဲ့အတိတ် ကို ရင်ထဲမှာမြှုပ်နှံပီး ရခဲ့သလောက်ကို ကျေနပ်ရော င့်ရဲတဲ့စိတ်ကို မွေးမြူပီး အတတ်နို င်ဆုံး ဘဝကို ရှေ့ဆက်သွားမယ်နော်။ သတိရသေးရင် အိမ်မက်ထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့..” ဆိုပြီး ပြောလာပါတယ်။ Source: Ngwe Ou’s fb
သ႐ုပ္ေဆာင္ ေျပတီဦး ရဲ့ညီ မျဖစ္သူ ေငြတီ ဦးကေတာ့ ေက်း ဇူးရွင္ေဖေ ဖကိုေရာ ခ်စ္ရ တဲ့ခင္ပြန္းသည္ ကိုေရာ အခ်ိ န္ခေဏ လးအတြင္းမွာ ဆုံးရႈံးခဲ့ရ တာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ေငြ တီဦးက (၁၀) ႏွစ္ၾကာေ ပါင္းသင္းေ နထိုင္ျခဲ့ ကတဲ့ ခင္ပြန္းသည္ကို သတိရတမ္း တေနလ်က္ ရွိၿပီး ခင္ ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ အ မွတ္တရေတြကို အျမဲတမ္း ရင္ဖြင့္ေန တာပဲျဖစ္ပါတ ယ္။
ဒီကေန႔မွာလည္း ေငြတီ ဦးက ခင္ပြန္းျဖစ္သူရဲ့ ေနာက္ဆုံးေန႔ရ က္ေတြမွာ တရားသေဘာဆင္ျခင္ၿပီး မိန္းမကိုလည္း အရမ္းခ်စ္ေၾကာ င္း တဖြဖြေျပာ သြားတဲ့ေအ ၾကာင္းကို ေျပာလာပါတယ္။
“လြမ္းပီးခံစား က်န္ရစ္ခဲ့မွာကို မျမင္ရက္ေ တာ့ေလာက္ေအာ င္ သူ႔ကိုအရ င္ေပးသြားခ်င္မိခဲ့တဲ့ ကိုယ္က ပိုခ်စ္ခဲ့တာလား..?? ကိုယ္ေဝဒနာ ခံစားရမွာၿမ ဖစ္ေစခ်င္လို႔ သူတစ္ေယာ က္ပဲ နာၾကဥ္ေနတဲ့ၾကား က ေက်နပ္တယ္ ေပ်ာ္တယ္ဆိုတဲ့ သူက ပိုခ်စ္ခဲ့တာ လား..?? တစ္ခ်ိဳ႕ သူေတြလဲ ကၽြန္မလိုပဲ ေတြးမိၾကမွာပါ။ အရင္ထြက္သြားခြင့္ရတဲ့သူက ကိုယ္ပဲျဖစ္ခ်င္ တယ္ဆို တာမ်ိဳး..ကၽြန္မေလ က်န္ခဲ့ရမွာ ကို ေသမွာထက္ သိပ္ေၾကာ က္တာ.. အရင္ေသသြားတာ ကိုယ္ပဲျဖစ္ခြင့္ရခ်င္တာ..ဒါေပမယ့္ ေဆး႐ုံပတ္လမ္းမွာ လမ္းေလၽွာ က္ေနရင္း ႐ုတ္တရက္ ခံစားခ်က္တစ္ခုဝင္လာတယ္..”
“က်န္ခဲ့ရတဲ့ နာၾကဥ္မႈကို သူ႔ကို မခံစားေ စခ်င္ေတာ့ပဲ လြတ္ေျမာ က္ၿငိမ္းေအး သြားတာ သူျဖစ္လဲ ေကာင္းတာပါပဲေလ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္..က်န္ခဲ့ရင္ အစစအ ရာရာ အဆင္ေၿမ ပမွာ စိုးတဲ့အထိ စိတ္မခ်တဲ့ ခံစားခ်က္..ခ်န္ထားရစ္ခံရမယ့္ေနရာကို ရင္နာနာနဲ႔ ၾကည္ျဖဴစြာ ခံယူလိုက္ခ်င္တဲ့ ခံစားခ်က္..ကိုယ္သိပ္ေ ၾကာက္တဲ့ က်န္ခဲ့ရမယ့္ ေဝဒနာကို သူမခံစားရပါေစနဲ႔ ဆိုတဲ့စိတ္က ႐ုတ္တရက္ ဝင္လာတာ.. အတၱကိုခြာခ်မွ ျမင္ရမယ့္ ေမတၱာနဲ႔ ႏြယ္တဲ့ အခ်စ္မ်ိဳးကို ႐ုတ္တရက္ခံစားခဲ့ရတယ္.. နာၾကဥ္မႈေတြ ကေန သူလြတ္ေျမာက္ သြားပါေစ..ဒီ့ထက္ ပိုေအးခ်မ္းမယ့္ဘဝမွာ ပိုပီးက်န္းမာသန္စြမ္းမယ့္ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အသစ္တဖန္ ျပန္စနိုင္ပါေစ.. ကိုယ့္ထ က္ပိုခ်စ္နို င္မယ့္သူနဲ႔ ဆုံပါေစ..”
“ပိုခ်စ္တဲ့သူ ကိုယ္ၿဖ စ္မယ္လို႔ထင္ ခဲ့တာ မွားသြားမွန္း အရာရာေနာ က္က်ၿပီးမွ သိခဲ့ရတယ္။ “ကို က ပိုခ်စ္တာ” လို႔ သူအျမဲေျပာတု န္းက ကိုယ္က သိပ္မယုံ ခဲ့မိဘူး။ ကိုယ္နဲ႔သူနဲ႔ အေၾကာ င္း သိခဲ့သူေတြ အထူးၾသ ဖင့္ အေမေပါ့ေလ.. “သူက သမီးကို ပိုခ်စ္တာ”တဲ့။ သူငယ္ခ်င္းေတြက “ေငြတီရယ္..သူပိုခ်စ္တာ ငါတို႔ေတာင္ သိတယ္တဲ့” သူတို႔ေျပာမွ တေျဖးေျဖး လက္ခံလာတယ္။ နိုဝင္ဘာ ကို ႏႈတ္ဆ က္ရေတာ့မယ္..ကိုရယ္.. အမွတ္ရစရာေတြ အရမ္းမ်ားတဲ့ နိုဝင္ဘာ.. ၁၁.၁၁.၁၁ မွာ လက္မွတ္ထိုးတယ္။ နိုဝင္ဘာမွာ Pre Wedding ေတြ ရိုက္တယ္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာမွာ Mediacorp နဲ႔ Collaboration လုပ္ပီး ပြဲေတြ လုပ္တယ္။ ဒီေန႔..၂၉ နိုဝင္ဘာ ၂၀၁၆ မွာ အိမ္စေဆာက္ဖို႔ ပႏၷက္တင္ေျမသန႔္မဂၤလာ လုပ္တယ္။ဒီနိုဝင္ဘာမွာပဲ ကိုက ထားခဲ့တယ္..”
“Anniversary မွီေအာ င္မ်ား ဒီေရာဂါဆိုးကို ၄ လေလာက္ ေတာင့္ခံေနခဲ့ တာလား။ ေဒါသစိတ္နည္းပီး သီးခံစိတ္ရွည္တတ္တဲ့ ကို႔အက် င့္ေၾကာင့္ တခါမွ ႀကီးႀကီးမားမား ရန္ မျဖစ္ခဲ့ဘူးသလို .. ခ်စ္က စိတ္ဆိုးလို႔ စကားမာမာေျ ပာမိရင္ေတာင္ စိတ္မဆိုးဘဲ.. ညေရာက္တာ နဲ႔ လက္ေ မာင္းေပၚ ေခါင္းကို အတင္းဆြဲတင္ပီး ေက်ာကို ပုတ္သိပ္ခဲ့တာ။ အရာရာဟာ ျပန္စဥ္းစားၾကည့္ရ င္ ေက်နပ္စရာ လြမ္းစရာေ တြႀကီးပဲ။ လူ႔ဘဝကို ခနလာ လည္တဲ့ ကို နဲ႔ ဆုံခြင့္ရခဲ့တာ အခ်ိန္အတိုင္းအ တာအရ နည္းတယ္ဆိုေပမ ယ့္ တစ္ေယာက္ကို တစ္ေယာက္ အေကာ င္းဆုံးျဖည့္စည္းေ ပးဆပ္ခြင့္ ရခဲ့တာ အေကာင္းဆုံးဆုလာဘ္ပဲ။
တစ္ေယာက္ကို တစ္ေ ယာက္ ဒဏ္ရာေတြမေပးခဲ့ၾကတာ။ တစ္ေယာက္ လိုအပ္ခ်က္ကို တစ္ေယာက္ ျဖည့္စည္းပီး အပစ္အနာအ ဆာေတြကို ခြင့္လႊတ္ ခဲ့ၾကတာ။ ရခဲ့ဘူးတဲ့ ခ်ိဳၿမိန္တဲ့အတိတ္ ကို ရင္ထဲမွာျမႇုပ္ႏွံပီး ရခဲ့သေလာက္ကို ေက်နပ္ေရာ င့္ရဲတဲ့စိတ္ကို ေမြးျမဴပီး အတတ္နို င္ဆုံး ဘဝကို ေရွ႕ဆက္သြားမယ္ေနာ္။ သတိရေသးရင္ အိမ္မက္ထဲမွာ ဆုံၾကတာေပါ့..” ဆိုၿပီး ေျပာလာပါတယ္။ Source: Ngwe Ou’s fb
ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့ ပိုင်တံခွန် အတွက် ကံကောင်းခြင်း ပန်းစည်းလက်ဆောင်တွေပို့ပေးခဲ့တယ် ဆိုတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
ဖခင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ ရေကူးဝတ်စုံ ဝတ်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှတ်တရ စကားလေးကို ပြန်လည်ပြောပြခဲ့တဲ့ မအေးသောင်း